Tụọ arụmọrụ nke HDD gị na Linux na hdparm | Site na Linux
Tụọ arụmọrụ gị HDD na Linux na hdparm
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ọtụtụ oge anyị na-achọpụta na arụmọrụ nke ihe nkesa abụghị ihe ọ kwesịrị, ebe anyị na-eche, olee nsogbu? Ọ ga-ezughi oke bandwit? … Enweghị CPU ma ọ bụ RAM? Ma obu ide na ogugu na HDD agagh adi nma?
N'ebe a, m ga-egosi gị otu esi amata ihe ọsọ kachasị HDD gị na-akwado, ọsọ ọ dị ugbu a ọ nwere ike ịrụ ọrụ na wdg, anyị ga-eji ngwa ọrụ: hdparm
1 Wụnye hdparm
2 Iji hdparm
Nke mbụ na ọ bụ ihe doro anya, anyị ga-etinyerịrị ngwanrọ nke anyị ga-eji. Ọ bụrụ na ị jiri Ubuntu ma ọ bụ Debian ị nwere ike iwunye ya na:
Ọ bụrụ na ị jiri ArchLinux ma ọ bụ ụfọdụ distro ndị ọzọ dabere na nke a ọ ga - abụ:
Nke mbu bu mara oke ọsọ nke HDD anyị, ya bụ, ọ bụrụ Sata1, Sata2 ma ọ bụ 3, kedụ ka ọ na-akwado. Maka nke a, anyị ga-eji iwu na-esonụ:
Nke a na-eburu n'uche na HDD anyị chọrọ nyochaa bụ / dev / sda, ya bụ, nke mbụ ma ọ bụ isi.
Ọ ga-egosi anyị ihe dịka nke a:
* Gen1 na-agba ọsọ ọsọ (1.5Gb / s) * Gen2 na-agba ọsọ ọsọ (3.0Gb / s) * Gen3 na-agba ọsọ ọsọ (6.0Gb / s)
Dabere na HDD ọkaibe, ma n'ezie, ọ bụrụ na ha nwere ọsọ ọsọ kachasị enyere aka na BIOS.
Ugbu a, ka anyị hụ ọsọ ọsọ ugbu a nke HDD na - arụ ọrụ:
Tinyegharịa iwu ahụ ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ iji nweta ọtụtụ ụkpụrụ.
/ dev / sda: Oge echekwara na-agụ: 22770 MB na 2.00 sekọnd = 11397.43 MB / sec Oge buffered disk agụ: 432 MB na 3.01 sekọnd = 143.59 MB / sec
Uru nke mbụ metụtara ọsọ nke oghere disk, uru nke abụọ pụtara ọsọ ọgụgụ na ederede n'ezie, nke diski anụ ahụ dị ka ndị a.
Enwere m olile anya na ị nyela aka.
N'agbanyeghị, ị pụrụ ịhụ a zuru ezu na ihe ọmụma zuru ezu banyere gị HDD site na iwepu grep nke iwu m nyere na mbụ, nke ahụ bụ, dị ka nke a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Tụọ arụmọrụ gị HDD na Linux na hdparm
Ha, amaghị m ihe kpatara na m gụrụ "Meziwanye arụmọrụ" kama "tụọ" na m ga-awụlikwa elu jụọ aghụghọ ị jiri. Daalụ
HAHAHAHA nke ọma ... ihe kachasị pụta ìhè bụ ịnweta SSD hehe, mana ọ kachasị ọnụ 😀
Oge ụfọdụ gara aga, enwere m diski atọ na desktọọpụ desktọọpụ wee ruo m na ebumnuche mbụ nke RAID bụ ọsọ na m mere RAID 3 (na-agbapụ), m depụtaghachiri ọsọ ọsọ atọ ma na ọghọm na ọ bụrụ na m tufuo diski m ga-atụfu ihe niile.
Site n'ụzọ, tupu RAID bụ "Redundant Array of Ixxensive Disks" ugbu a ọ bụ "Disks Independent" n'ihi na n'ozuzu anyị achọghị oke ọsọ kama ịdabere data.
Otu ihe ahụ mere m!
Iji ihe IDE disk (PATA) ihe ochie, oke ọsọ ị kwuru na-apụta na -Ọ naghị apụta maka m. N'aka nke ọzọ, ndị dị ugbu a na-apụta, nke iji nye gị echiche bụ:
Oge echekwara na-agụ: 334 MB na 2.01 sekọnd = 166.40 MB / sec
Oge buffered disk agụ: 148 MB na 3.03 sekọnd = 48.77 MB / sec
Daalụ maka ikwu 😀
Maka ule ndị ọzọ ana m akwado phoronix
Agaghị m egwu egwuregwu siri ike n'ụlọ. Enweghị nkọwa ọ bụla gbasara sayensị na mgbakọ na mwepụ, obere ka ị kwụsịrị ya na ntụgharị (gbanyụọ ya), nke ka mma ka ị ga-eme. Nwere ike imebi ya site na ịkọwapụta ya, ịpịkọta ya, izo ya ezo, wdg, ọtụtụ oge. Ihe eji achọ ihe diski adịghị emerụ ahụ, ka ị na-eji ha, ka ị na-agbazi diski ahụ. Dị ka SSDs na draịva USB, ha nwere ole na ole ederede. Iji ha site n'oge ruo n'oge dị mma, mana na-emebiga ya ókè.
Ma obere ị kwụsịrị / buut diski ahụ ka mma.
Wepụta diski ahụ ka ị nwere ike.
Wụnye Gnome Classic (Flashback) na Ubuntu 14.10 / Linux Mint 17
Mechie ma malitegharia site na iji iwu